Ezekiel 25 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
2 Nyana womntu, bhekisa ubusoubuso bakho koonyana baka-Amon, uprofete ngabo,
4 ngako oko, yabona, ndikunikela koonyana basempumalanga, ukuba bamele kuwe, bamise iingqili zabo kuwe, benze neendawo zokuhlala kwabo kuwe. Bona baya kudla iziqhamoiziqhamo zakho, basele amasi akho.
5 Ndiya kuyenza iRabhaiRabha ibe likriwa leenkamela, eloonyana baka-Amon ndilenze libe yindawo yokubutha kwemihlambi; nazi ukuba ndinguYehova.
7 ngako oko, yabona, ndisolula phezu kwakho isandlaisandla sam, ndikunikele ezintlangeni, ukuba ube lixhoba, ndikunqumle ezizweni, ndikwenze udake, ungabikho emazweni. Ndiya kukutshabalalisa; wazi ukuba ndinguYehova.
8 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba besithi ooMowabhi, noSehire, Yabonani, injengeentlanga zonke indluindlu yakwaYuda:
9 ngako oko, yabonani, ndivula icalaicala likaMowabhi, ndithabathela emizini yakhe, kwesekupheleni kwakhe, eligugu lelizwe, iBhete-yeshimoti, neBhahali-mehon, ndise eKiriyatayim.
13 ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kusolula isandlaisandla sam naphezu kwelakwaEdom, ndinqumle kulo umntu nenkomo; ndilibharhise, kuthabathele kwaTeman; bawe likrele, kuse nakwaDedan.
16 ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, YabonaYabona, ndiya kusolula isandlaisandla sam phezu kwamaFilisti, ndiwanqumle amaKreti, ndiwatshabalalise amasalela aselunxwemeni lolwandle.